Sida Loo Isticmaalayo Linux ee Azure, Qaybta I: Fikradaha - ITS Tech School
Microsoft waxay samaysay talooyin dhowr ah oo ku saabsan Linux iyo kooxda furan ee furan sannadihii u danbeeyay. Wax kasta oo ka socda SQL Server iyo Visual Studio ee Linux si ay u shaqeeyaan xayawaanka dhabta ah ee buluuga ah ee 10. Xaqiiqdii, Bishii Nofeembar ee 2016, Microsoft waxay ku biirtay Linux Foundation oo ah qaybta platinum. Iyada oo inta badan kuwan waxaa laga yaabaa in aan la ogaan karin bilowga hore, iyo faragalinta badan ee aragtida ugu muhiimsan, marxaladda Microsoft si ay ula qabsadaan oo si buuxda u xoojiso Linux-Microsoft Azure. Waxaan u baahanahay inaan la wadaagno qayb ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee aan u baddalay dad weyn oo u tartamaya Linux ee Azure.
Linux waa kan ugu sarreeya ee ciyaaryahankooda Casure
Markii aan bilaabay baadhitaan ku saabsan laynka Casune ee Azure, waxaan u diyaarsanayay inaan u baahanno in aan qaato hab cusub oo xagjir ah si aan uga shaqeeyo Azure. Anigu waxaan la shaqeynayey (hagaagay, guud ahaan la ciyaaraya) Azure tan iyo aasaaskeeda furfuran. Waxaan ka soo guuray marxaladda injineerka illaa heerkii aasaasiga ahaa iyo xitaa mid ka mid ah mid ka mid ah Azure oo loo beddelay labo. Waxaan u diyaargaroobey inaan u dhaqaaqo Linux oo ku saabsan Azure.
Iska daa, waan ka xumahay. Qaab-dhismeedka Azure waa dhowaan-waa saldhigiisa. Waxay u shaqeysaa Linux si ay u fuliso Windows, si sax ah sida aad filayso isbeddel ama firewall si ay u shaqeeyaan bixinta ixtiraam yar marxaladda loo isticmaalo. Si daacadnimo ah, waxay ahayd mid aad u dhow duco si aad u kacsan.
Intii lagu jiray muddadii ugu dambaysay ee Microsoft, waxay soo saartey horumarinta habboon ee caqligooda iyo sheyada iyaga oo tixgelinaya in ay furaan ilaha marka dhammaantood la qabto iyo si gaar ah Linux. Ilaha furan lama arki karo, laga yaabo in aynu nidhaahno, iftiin xun. Microsoft Azure waxay u egtahay halka ay tani tahay mid aad u muuqata, waa marxaladda ugu muhiimsan ee Microsoft oo ay ka muuqato Linux.
Mid ka mid ah xaqiiqda dhabta ah (in aad maqli doonto bil kasta Microsoft ee Azure) waa in meel ka badan boqolkiiba 40 ee mashiinnada farsamada cusub ee laga sameeyey Azure waa run ahaantii Linux ku salaysan. Waxaan ku jiray dhowr waxyaabood oo ay ku muujinayaan in ay tahay qaybta ugu weyn ee shaqooyinka cusub, hase yeeshee habkii aadka u weynaa. Fikrado soo kabsasho sanadeedka 10 oo muujinaya Microsoft in qiimaha cusub ee shaqada cusub ee deegaankooda ugu muhiimsan uu noqon doono Linux. Taasi waxay noqon laheyd madadaalo, weli waan ka baxayaa.
Microsoft waxay tagtay kulamadii, laakiin waxay dhamaantood hadda yihiin. Sameynta xarumo Linux ku salaysan Azure waa sida fudud ee samaynta ilo ku saleysan Windows. Dhammaan si aad ah, kheyraadka Linux waxay kulmi karaan helitaanka iyo faa'iidada Azure. Microsoft ayaa hadda la soo xirxiray qaar ka mid ah baayacmushtarro Linux ah oo aan la isku haleyn karin si ay u maamulaan mashaariicda aasaaska, heerarka iyo barnaamijyada. Badeecadaha, tusaale ahaan, Red Hat iyo Docker ayaa leh maamullo la samayn karo daqiiqado gudahood Azure. Maamulada furan ee furan, tusaale ahaan, Redis Cache iyo Chef ayaa hadda ah xarun qayb ka mid ah qaabka Azure.
Waa wax kasta oo ay adag tahay in la sameeyo oo la kormeero ilaha Linux ee Azure
Injineernimada aasaasiga ah ee Azureure ayaa Linux ka dhigaya ciyaaryahan u dhigma Windows. Xarunta cirifta ee xarunta waxay ku burburtaa saddex fasal oo aasaasi ah: kaydinta, abaabulida iyo sawirka. Awoodda iyo awoodda maamul ee nidaamka Azure waa camal fekerka OS, taas oo macneheedu yahay inay u shaqeyn doonaan si isku mid ah haddii ay orodo Windows ama Linux.
Waxa ugu muhiimsan ee dhab ahaantii isbeddelaa waa qaabka shaqada ee ku shaqeeya mashiinka farsamada. Waa hagaag iyo cadaan ahaan codsiyada ku dhex jira qaabka shaqada.
In Azure waxaad ka dhigi kartaa inta badan kheyraadka kale ee ka hor intaadan dhejin mashiinka farsamada markaas kadibna ku xir mishiinka farsamada ee khayraadka saxda ah. Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa qeyb ka mid ah ilaha dhaqaalaha isla markiiba isticmaalaya safka amarka ama gelitaanka. Nidaamku waa isku mid haddii aad samaysanaysid ilaha Windows ama ilaha Linux.
Sida lagu sheegay dhowr jeer waxaan ahay nin Windows ah, weli waxaan isticmaali jiray macaamiil Linux ah si aan u kormeero wax kasta oo ku saabsan Azure mudo ah. Waqtigan xaadirka ah, daacad ahaan aniga iyo weynba waxaan isticmaalaa qolka GUI, hase ahaatee waxaan isticmaalay qolka Bash ee qaybta ugu weyn ee shaqadayda iyo hirgelinta mashiinada farsamada. Microsoft wuxuu ku siinayaa qalab isdaba joog ah, tusaale ahaan, CLI ama XPLAT CLI marka la eego fursadda aad u baahan tahay si aad u tijaabiso, taasoo kuu oggolaaneysa inaad si buuxda u kormeerto Azure. Tusaale ahaan, si aad u samayso mishiinka farsamada, waxaad isticmaali laheyd:
azure vm make -Q canonical: ubuntuserver: 14.04.4-LTS: ugu dambeeyay ...
Dhismaha qaab-dhismeedka luuqadda ee qaab-dhismeedka luuqadda ayaa dhab ahaantii macquul ah. Waxaan runtii ka ogaanayaa qaabka qarashka ah ee qalabka CLI-da oo ka badan aaladaha "PowerShell" (taas oo ah qalabka muhiimka ah ee nidaamka xayeysiiska ee Windows).
Waxa jira waxyaabo badan oo aan caadi ahayn oo lagu kobcin karo Linux oo ku saabsan Azure. Raadi qaybta labaad ee qodobkan, halkaas oo aan ka wada hadli doono dib-u-heshiisiinta, macaamiisha, amniga, iyo hawl-galka. Laba gaaban oo shahaadooyin ah, kuwaas oo ku siinaya waayo-aragnimo faa'iido leh si aad u kiciso oo ula ordid Linux oo ku saabsan Azure hadda waa la heli karo.